ဆီးချိုရောဂါရှိသူများ အနာကျက်နှေးရခြင်းအကြောင်း - Hello Sayarwon
ဆီးချို သွေးချို » အမျိုးအစား (၂) ဆီးချို
ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Phyo Wai Lynn | ရေးသားသူ Dr. Thant Zin
Update Date အောက်တိုဘာ 5, 2020 .2mins read
ဆီးချိုရောဂါဟာ အင်ဆူလင်ဟော်မုန်းကို ကိုယ်ခန္ဓာကနေ ထိရောက်စွာ မထုတ်လုပ်နိုင်၊ အသုံးမချနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဆူလင်ဟော်မုန်းဟာ ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာ သကြားဓာတ်ကို စွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲအသုံးချနိုင်အောင် အားပေးတာကြောင့် အင်ဆူလင်အာနိသင် မထိရောက်တဲ့အခါ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ဟာ မြင့်တက်လာပါတယ်။
သွေးတွင်းသကြားဓာတ် မြင့်မားနေခြင်းဟာ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ထိခိုက်အနာတရဖြစ်ရင် အနာကျက်နှေးသွားစေပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါသည်တွေမှာ ထိခိုက်ပွန်းခြစ်ခြင်း၊ ကွဲရှခြင်း၊ အပူလောင်ခြင်း စတာတွေကြောင့် အနာဖြစ်လွယ်တဲ့အပြင် ပျောက်ဖို့လည်း ခဲယဉ်းပါတယ်။ ခြေထောက်ဟာ ထိခိုက်မှုအများဆုံး ကြုံရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်ထိခိုက်ရှနာလေးဖြစ်ရုံနဲ့ အနာဟာ ကြီးသွားတတ်ပါတယ်။
ထိရောက်စွာ မကုသရင် အနာရင်းပြီး ခြေထောက်ဖြတ်ရလောက်တဲ့ ဆိုးရွားသွားနိုင်ပါတယ်။ စစ်တမ်းများအရ ဆီးချိုဖြစ်ပြီး ခြေထောက်အနာဖြစ်သူများရဲ့ ၁၄-၂၄ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာ ခြေထောက်ဖြတ်တောက်ရတဲ့အထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဆီးချိုရောဂါရှိသူများအနေနဲ့ မိမိကိုယ်ခန္ဓာမှာ အထူးသဖြင့် ခြေထောက်မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ ပုံမှန်စစ်ဆေးရပါမယ်။ အနာဖြစ်တာကို စောစောသိလေလေ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများ ဖြစ်နိုင်ခြေ လျော့နည်းလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုဆက်လက်ဖော်ပြမှာကတော့ ဆီးချိုဟာ အနာကျက်ခြင်းကို ဘယ်လိုနှောင့်နှေးစေသလဲ ဆိုတာပါပဲ။
ဆီးချိုဟာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ အနာကျက်ခြင်းကိုနှေးစေနိုင်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် အောက်ပါအကြောင်းတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
သွေးတွင်းသကြားဓာတ်မြင့်မားနေတဲ့အခါ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ဆဲလ်တွေမှာ အာဟာရဓာတ်များနဲ့ အောက်ဆီဂျင်ကို ထိရောက်စွာ အသုံးချနိုင်ခြင်း မရှိတော့ပါဘူး။ ကိုယ်ခံစွမ်းအားလည်း ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ပါဘူး။ ဆဲလ်တွေမှာ ရောင်ရမ်းခြင်း မြင့်မားလာပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာတွေကြောင့် အနာကျက်နှေးပါတယ်။
သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ဟာ ပုံမှန်ထက်မြင့်တက်နေတာ ကြာလာရင် အာရုံကြောများ အားနည်းလာနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အစွန်အဖျားနေရာတွေဖြစ်တဲ့ ခြေဖျားလက်ဖျားက အာရုံကြောတွေ ချို့ယွင်းလာပါတယ်။ အာရုံခံနိုင်စွမ်းလည်း လျော့ကျလာပါတယ်။ အာရုံခံနိုင်စွမ်း လျော့လာတဲ့အတွက် မိမိရဲ့ခြေထောက်ဟာ ဆူးညောင့် ဒါမှမဟုတ် တခြားအရာဝတ္တုတွေနဲ့ ထိခိုက်မိတာတွေ၊ အပူလောင်တာတွေကို ခံစားမှု သိပ်မရပါဘူး။
ဒါ့အပြင် လမ်းလျှောက်ရာမှာလည်း မိမိခြေထောက်ကို လိုရာကို ထိထိရောက်ရောက်လှမ်းနိုင်စွမ်း နည်းလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆီးချိုရောဂါသည်တွေမှာ ခြေထောက်ပိုင်း မကြာခဏထိခိုက်မှုဖြစ်ပြီး ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း အနာကျက်နှေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးချိုရှိသူတွေဟာ သာမန်လူတွေထက် သွေးကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေ ဖြစ်ပွားမှု များတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ခြေဖျားလက်ဖျားသွေးကြောတွေဟာ ကျဉ်းမြောင်းလာပြီး သွေးလည်ပတ်မှု မကောင်းတော့ပါဘူး။ သွေးနီဥဆဲလ်တွေဟာ သွေးကြောတွေထဲမှာ လိုရာနေရာကို လှည့်ပတ်သွားလာဖို့ ခက်ခဲလာပါတယ်။ သွေးလည်ပတ်မှုမကောင်းတာကြောင့် အနာဖြစ်ရင် အကျက်နှေးသွားပါတယ်။
ဆီးချိုရှိသူတွေမှာ ကိုယ်ခံစွမ်းအားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာလည်း ရှိပါတယ်။ ထိခိုက်ရှနာဖြစ်တဲ့နေရာတွေကို ခုခံတိုက်ခိုက်မယ့် ဆဲလ်တွေဟာ ကောင်းကောင်းမရောက်နိုင်တော့ပါဘူး။ ကိုယ်ခံစွမ်းအား ကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်တော့တဲ့အတွက် အနာကျက်နှေးပြီး ရောဂါပိုးမွှားများ ဝင်ရောက်ဖို့ ပိုမိုလွယ်ကူလာပါတယ်။
ကိုယ်ခန္ဓာအရေပြားပေါ်မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရင်၊ အနာဖြစ်ရင် ရောဂါပိုးဝင်ရောက်ဖို့ ပိုမိုလွယ်ကူသွားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆီးချိုရှိသူတွေမှာ အနာဖြစ်လွယ်တဲ့အပြင် ကိုယ်ခံအားလည်း နည်းသွားလို့ ရောဂါပိုးများ ဝင်ရောက်နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်များနေခြင်းကလည်း ဘက်တီးရီးယားတွေကို ပိုမိုပေါက်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။ ထိရောက်စွာ မကုသဖြစ်ရင် သွေးဆိပ်တက်ခြင်း၊ အသားပုပ်ခြင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆီးချိုရှိသူတွေမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ၊ အနာဖြစ်ခြင်းဟာ သေချာမကုသရင် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာကြီးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဆီးချိုကို ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း၊ အနာရောဂါဖြစ်လာရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပုံမှန်ပြသပြီး ကုသမှု ခံယူခြင်းတွေ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
https://www.healthline.com/health/diabetes/diabetes-and-wound-healing Accessed Date5october 2020
ဆီးချိုသမားတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံး ဟင်းချက်ဆီ ရွေးချယ်မယ်။ ရွေးချယ်တာက ဆီးချို အပြင် နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုပါ ကာကွယ်ရာရောက်ပါတယ်။
ဆီးချို သွေးချို, အမျိုးအစား (၂) ဆီးချို မတ် 12, 2021 .2mins read